Sugar Geek Show - သကြားပူဖောင်းပါသော Pink Champagne ကိတ်မုန့် - ကိတ်မုန့်
ဤပန်းရောင်ရှမ်ပိန်ကိတ်မုန့်သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စိုစွတ်။ fluffy ဖြစ်သည်။ ငါအပိုဖြစ်လိုသောကြောင့်, ငါသကြားပူဖောင်းများအချို့နှင့်ဆွဲငင်အား - အန်တုရှမ်ပိန်ပုလင်းပါဝင်သည်! ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်!
ပန်းရောင်ရှမ်ပိန်ကိတ်မုန့်သည်မည်သည့်အခမ်းအနားမဆိုအတွက်အသုံးပြုရန်အလွန်ကောင်းသောကိတ်မုန့်ဖြစ်သည်။ ပွဲကျင်းပခြင်းကိုအော်ဟစ်သောပန်းရောင်အလွှာများအကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာမျှသာရှိသည်။ ငါနှစ်သစ်ကူးEveဝကိုအဘို့ဤပန်းရောင်ရှမ်ပိန်ကိတ်မုန့်လုပ်ပေမယ့်တကယ်အချိန်မရွေးကိတ်မုန့်တစ် ဦး အကြီးအအရသာပါပဲ။ ငါနဲ့တွဲခဲ့တယ် လွယ်ကူသော buttercream နှင်းခဲ အရသာနွေးစေရန်သကာရည်တစ်ထိနှင့်အတူ။
1/8″ Armature ဝါယာကြိုး
acrylic ကိတ်မုန့် Riser
1/4″ သစ်သား Dowel
ငါသည်ငါ့ကျော်ကြားပန်းရောင်ကတ္တီပါကိတ်မုန့်ကနေဒီစာရွက်အဆင်ပြေအောင်ပေမယ့်သကြားနည်းနည်းလျှော့ချခြင်းနှင့်အချို့သောထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည် ဝိုင်အရသာ နှင့်သင်တန်း၏, စာရွက်မှရှမ်ပိန်။ ငါသည်ငါ့ရှမ်ပိန်ကိတ်မုန့်ပန်းရောင်လုပ်ပေမယ့်သင်လိုလျှင်သင်ကလုံးဝကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။ အရောင်ဟာအရသာကိုမထိခိုက်ပါဘူး။
ရှမ်ပိန်အားလုံးသည်အတူတူမဟုတ်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ ၎င်းတို့သည်အလွန်မချိုမြသော (ဆိုးရွားသည့်သဘာဝ) မှအလွန်ချိုမြိန်သော (demi sec) နှင့်များစွာကွာခြားသည်။ ဒီရှမ်ပိန်ကိတ်မုန့်အဘို့, လမ်းအလယ်၌ဘာမှစာရွက်အဘို့အလုပ်မလုပ်သွားသည်။ ပုလင်းပေါ်က“ brut” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှာပါ။ သငျသညျ demi-sec ကဲ့သို့သောချိုရှမ်ပိန်ကိုသုံးပါလျှင်, ထိုထပ်တိုးချိုမှုအတွက်အကောင့်မှ 1 ဇွန်းအားဖြင့်စာရွက်ထဲမှာသကြားလျှော့ချပါ။
ကောင်းပြီ, ရယ်စရာသင်မေးသင့်ပါတယ်။ ပန်းရောင်ရှမ်ပိန်ကိတ်မုန့်ကအရသာရှိတာပဲ။ များစွာသောသူတို့သည်ဖန်စီပြုလုပ်ထားသောရှမ်ပိန်တစ်ခွက်ကိုကောက်ယူခြင်းနှင့်သောက်ခြင်းကဲ့သို့အရသာမမြုပ်သော်လည်း၎င်းသည်မွှေးသော vanilla အရသာနှင့်အတူရောနှောနေသော tangy-ness နည်းနည်းရှိသည်။
ပန်းရောင်ရှမ်ပိန်ကိတ်မုန့်သည်ဖြည့်စွက်သွားသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်အစဉ်အလာကဲ့သို့သောသစ်သီးဖျော်ရည်များနှင့်အကောင်းဆုံးတွဲဖက်ထားသကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောစွယ်စုံဖြင့်ဖြစ်သည် စတော်ဘယ်ရီ buttercream ငါကဲ့သို့သောအလင်း buttercream အညိုရောင်သကြား buttercream နှင်းခဲ ။ ဒါဟာအစနှင့်အတူကောင်းစွာတွဲ အဖြူရောင်ချောကလက် buttercream ။
အားလုံး၏သိပ္ပံသို့မ ၀ င်ပါကအဖြေမှာဟုတ်ပါသည်။ သငျသညျ 6″ သို့မဟုတ် 8″ အလွှာများကိုဖုတ်သည့်အခါကိတ်မုန့်သည်အရက်ပါဝင်မှု၏ ၁၀% ခန့်ကိုထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်။ ၁၀″ ကိတ်မုန့်များသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအရက်ကထွက်လာလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်၌အရက်တစ်ခုခုကျန်ရှိနေမည်ကိုစိုးရိမ်ပါကတကယ့်ရှမ်ပိန်အစားရှမ်ပိန်အရသာကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါသုံးတယ် Lorann Oils Sparkling Wine အရသာ ။
လှမ်း 1 - ကိတ်မုန့်လုပ်ပါ ။ မီးဖိုကို 335 ºFအထိအပူပေးပြီး ၆″ x2″ ကိတ်မုန့်သုံးလုံးကိုပြင်ဆင်ပါ ကိတ်မုန့် သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဒယ်အိုးမဆို
အဆင့် ၂ - စကေးကိုသုံးပါ သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအလေးချိန် (အရည်များအပါအ ၀ င်) မဟုတ်ပါကညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါ (ဇွန်း၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၊ အဖြစ်တော့စသည်) ။ မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုစာရွက်ကဒ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစားပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ခွက်များအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမိုတိကျပြီးသင်၏စာရွက်၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေသည်။
Mars m & m cookies များကိုစာရွက်
အဆင့်3- မုန့်ညက်၊ သကြား၊ မုန့်ဖုတ်အမှုန့်၊ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါနှင့်ဆားတို့ကိုရောနှောထားသောရောနှောထားသောအိုးတစ်လုံးနှင့်လှော်ချိတ်တွဲပါရှိသည်။ ပေါင်းစပ် 10 စက္ကန့်ရောမွှေပါ။
အဆင့်4- နို့နှင့်ဆီကိုအတူတကွပေါင်းပြီးဖယ်ထားပါ။
အဆင့်5ဥကြက်ဥဖြူ၊ ဝိုင်အရသာ၊ ရှမ်ပိန်နှင့်ဗင်နီယာတို့ကိုအတူတကွပေါင်းစပ်။ ဥများကိုခွဲရန်နှင့်ဘေးဖယ်ထားပါ။ မင်းကိတ်မုန့်ကိုပန်းရောင်လိုချင်ရင်ပန်းရောင်အစားအစာအရောင်ကိုထည့်ပါ။ ဘေးဖယ်ထားပါ။
အဆင့်6- သင်၏နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်များကိုခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများထဲသို့ထည့်ပြီးအရောအနှောသည်ကြမ်းတမ်းသောသဲနှင့်တူသည် (စက္ကန့် ၃၀ ခန့်) သည်အထိရောနှောပါ။
အဆင့် ၇ - သင်၏နို့ / ရေနံအရောအနှောတွင်ထည့်ပြီးခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများစိုစွတ်သည်အထိရောမွှေပါ။ ထို့နောက် Med (တက်လာသည့်ကျွန်ုပ်၏ Kitchenaid တွင်သတ်မှတ်ခြင်း) သည်ကိတ်မုန့်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ၂ မိနစ်ခန့်ရောနှောပါစေ။ သင်ဤအဆင့်တွင်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုရောမွှေပါကသင်၏ကိတ်မုန့်ပြိုကျနိုင်သည်
အဆင့် ၈ - ပန်းကန်လုံးကိုခြစ်ပြီးအမြန်နှုန်းကိုအနိမ့်သို့လျှော့ချပါ။ သင်၏ကြက်ဥအဖြူအရောအနှောကိုထပ်ဆင့်သုံးခုထဲထည့်ပြီး Battery ရောနှောခြင်းကိုထပ်တိုးများအကြား ၁၅ စက္ကန့်မျှခွင့်ပေးပါ။
အဆင့်9- သင်၏ကိတ်မုန့်ပြားများထဲသို့ခွဲယူပါ။ မိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ အတွင်းသို့မဟုတ်သွားတိုက်တံကအလယ်မှသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာမထွက်မချင်းဖုတ်ပါ။ တချို့ကျုံ့ပုံမှန်ပါပဲ။
အဆင့် 10 - ကိတ်မုန့်မှရေနွေးငွေ့ကိုလွှတ်ရန်တစ်ချိန်ကကောင်တာပေါ်ရှိကိတ်မုန့်ကိုချက်ချင်းအသာပုတ်ပါ။ ဒါကကိတ်မုန့်အလွန်အကျွံကနေတားဆီး။ သင်ကချက်ခြင်းအလှဆင်လိုပါကပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးထုပ်ပြီးသင်လိုအပ်သည်အထိအေးခဲစေလိုပါကကိတ်မုန့်များကိုရေခဲသေတ္တာထဲသို့မိနစ် ၃၀ ခန့်ထားပါ။
အဆင့် 1 - ကြက်ဥအဖြူနှင့်အမှုန့်သကြားတို့ကိုသင်၏ရပ်နားသည့်အရောအနှော၏ထည့်စရာပုံးနှင့်တွဲလျက် whisk ပူးတွဲပါပြီး ၅ မိနစ်အမြင့်တွင်ရိုက်ပါ။
အဆင့် ၂ - သင်ထောပတ်အားလုံးကိုထည့်ပြီးသည်အထိကြာရှည်ချိန်တွင်သင်၏ထောပတ်ကို (ပျော့ပြောင်း။ ) အပိုင်းအစများဖြင့်စတင်ထည့်ပါ။ သင်၏ဆား၊ သကာရည်နှင့် vanilla တွင်ထည့်ပါ။
အဆင့်3- buttercream သည်အခွံမည်းဘဲမွှေး။ အဖြူရောင်ရောက်သည်အထိဆက်လက်ရိုက်နှက်ပါ။ သင်၏ရောနှောမှုပေါ် မူတည်၍ ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အထိကြာနိုင်သည်။ ထောပတ်သီးအရသာရှိရင်ရောစပ်ပါ။
အဆင့်4- (optional) လှော်ပူးတွဲပါမှ switch နှင့်နှင်းခဲထဲကနေပူဖောင်းဖယ်ရှားပစ်ရန် 10-15 မိနစ်အနိမ့်အပေါ်ရောမွှေပါ။ Frosting သည်ပျော့ပျောင်းပြီးပုံမှန်ဖြစ်သည်။
Pro-Tip: မင်းရဲ့ buttercream ကအရမ်းအေးလွန်းပြီးပန်းကန်ကိုတွယ်ကပ်နေတယ်ဆိုရင်ခွက်တစ်ခွက်ကိုယူပြီးစက္ကန့် ၃၀ ကြာမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်လုပ်ပါ။ ပူနွေးသော buttercream ကိုပြန်လည်ရောနှောထားသောပန်းကန်ထဲသို့ပြန်ထည့်ပါ။ ၎င်းသည် buttercream ကိုပိုမိုထိရောက်စွာသက်ရောက်စေပြီးပိုမိုပေါ့ပါးလာစေသည်။
အဆင့် 1 - သင်၏ကိတ်မုန့်အေးခဲ။ သင်၏ကိတ်မုန့်များကို 1/4 about ခန့် buttercream နှင့်အတူအလွှာတစ်လွှာကိုသုတ်လိမ်းပြီး (crumb coat (ပါးလွှာသော buttercream အလွှာ)) ကိုသုံးပါ။ မင်းရဲ့ကိတ်မုန့်ကို ၁၅ မိနစ်ခန့်အေးအောင်လုပ်ပါ။ ပြီးရင်နောက်ဆုံးကုတ်အင်္ကျီကိုလိမ်းပြီးသင့်ရဲ့ offset spatula နဲ့ bench scraper နဲ့ချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ပါ။
သငျသညျကိတ်မုန့်နှင်းခဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုသောအချက်အလက်များလိုအပ်ခဲ့လျှင်ငါ့အစစ်ဆေးပါ သင့်ရဲ့ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဗွီဒီယို
အဆင့် ၂ - သင့်ပူဖောင်းများကိုပြုလုပ်ပါ။ အပူခံနိုင်သည့်ကွန်တိန်နာအတွင်းရှိကြည်လင်သော isomalt ၆ အောင်စအရည်ပျော်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ ငါ isomalt ရှမ်ပိန်အရောင်ကိုပေးစေခြင်းငှါအကြောင်းကို 1/4 Tsp ရွှေတောက်ပဖုန်မှုန့်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
အဆင့်3- သင်၏နယ်ပယ်မှိုများကိုအတူတကွတံဆိပ်ခတ်ပါ။ အရည်ပျော်သော isomalt ကိုချိုင့်ဝှမ်းရှိမှိုထဲသို့လောင်းပါ။ ထိုအခါမှိုကျော်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိုလျှံ isomalt သွန်။ အပြည့်အဝအအေးခံဖို့မှိုပြီးတော့လုံးဝဖယ်ထားပါစေ။ သင့်တွင် 3D နယ်ပယ်မှိုမရှိပါကသင်က ၀ တ္ထုတစ်ဝက်မှိုများကိုသုံးနိုင်သည်။ ပူပြင်းသည့်ပြားပေါ်တွင်အစွန်းကိုနွေးထွေးစွာနှစ်ဖက်စလုံးကိုတွန်းပေးခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုအတူတကွကပ်နိုင်သည်။
နယ်ပယ်တွင်ရှိသော nubs များကိုဓားဖြင့် (မီးဖိုချောင်သုံးမီးရှူးဖြင့်အပူ) ဖြတ်ပါသို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်သင်ထားသောအခါ nubs များကိုဖုံးကွယ်ထားပါ။ ငါသည်လည်း isomalt အချို့ကို ၀ က်တုံးတစ်ဝက်သို့သွန်းလောင်းခဲ့သည်။
အဆင့်4- သင်၏ယိုထည့်ပါ။ ငါသုံးနေတယ် လွယ်ကူစက်စက် ဒါပေမယ့်လည်းသင်အသုံးပြုနိုင်တယ် ရေ ganache ရွှေစင်ကို၎င်း၊ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာရှိတဲ့စက်ကိုစက္ကန့် ၃၀ လောက်အရည်ပျော်သွားတဲ့အထိ ၁၅ စက္ကန့်တိုးပြီးအရည်ပျော်ခဲ့တယ်။ အအေးခံထားရသောကြောင့်အနည်းငယ်ထူ။ အရည်ဖြစ်ဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သောရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုရှိစေရန်သင်၏ရေခဲသေတ္တာတွင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အဆင့်5- ကောက်ရိုးကိုကိတ်မုန့်ထဲထည့်ပြီးအောက်ခြေဘုတ်ကိုဆန့်ပြီးသူကကိတ်မုန့်ထိပ်နဲ့တန်းလိုက်မယ်။ 1/4″ သစ်သား Dowel ကိုကောက်ရိုးထဲသို့ချပြီးလျှင်ကိတ်မုန့်ထိပ်မှ ၃ about ခန့်လောက်ချုံ့ပါ။
အဆင့်6- သံမဏိကြိုးတစ်ချောင်းကို ၈″ ရှည်လျားသောအလူမီနီယံသတ္တုပြားတိပ်ဖြင့်ချည်ပါ။
အဆင့် ၇ - ၎င်းကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်တိုင်အောင်သို့မဟုတ်သင်က paintbrush တစ်ခုဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်သည်အထိသတ္တုပါးပေါ်သို့ယိုများထပ်ထည့်ပါ။
အဆင့် ၈ - အချည်းနှီးသောရှမ်ပိန်ပုလင်းကိုထိပ်သို့ထည့်ပါ။
အဆင့်9- သင်၏ပူဖောင်းများကို buttercream အနည်းငယ်ဖြင့်ကိတ်မုန့်တွင်ကပ်ပါ။ ပူဖောင်းအချို့ကိုအရည်ကျို isomalt ကို အသုံးပြု၍ ကပ်ပါ။ ငါ isomalt အပေါ်ထိုးရန်ဆီလီကွန် tool ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သင်သာသေးငယ်တဲ့ပမာဏလိုအပ်ပါတယ်။
ဒါကမင်းအရင်ကမြင်ဖူးသမျှထဲမှာအများဆုံးပန်းရောင်ရှမ်ပိန်ကိတ်မုန့်မဟုတ်လော။ ဓာတ်ပုံတွေဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ငါခံစားရတယ်။ ပူဖောင်းတွေဘယ်လိုကြည့်လဲ၊
သငျသညျဤကိတ်မုန့်လုပ်နှင့်သင်၏ပို့စ်များတွင်ငါ့ကို tag ရန်မမေ့မလြော့ပါလျှင်မှတ်ချက်များအတွက်ငါ့ကိုသိပါစေ! ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်!
ဘရောင်းသကြားဆွစ်ဇာလန် Meringue Buttercream
ရေ Ganache ယို
အညိုရောင်သကြားနှင့်အလွယ်တကူ buttercream သကြားပူဖောင်းများနှင့်ပန်းရောင်ရှမ်ပိန်ကိတ်မုန့်နှင့်ဆွဲငင်အားဆန့်ကျင်ရှမ်ပိန်ပုလင်း! ပြင်ဆင်ချိန် -ဆယ့်ငါး မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၃၀ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:လေး မိနစ် ကယ်လိုရီ1817kcal
▢၁၃ oz (368 ဆ) မုန့်ညက်မုန့်ညက်
▢၁၀ oz (၂၈၄ ဆ) သကြား
▢၁ ဇွန်း မုန့်ဖုတ်ပေါင်ဒါ
▢1/2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ
▢၆ အောင်စ (၁၇၀ ဆ) unsalted ထောပတ် အခန်းအပူချိန်
▢၄ အောင်စ (၁၁၃ ဆ) နို့ အခန်းအပူချိန်
▢၆ oz (၁၇၀ ဆ) ရှန်ပိန် အခန်းအပူချိန်
▢၄ အောင်စ (၁၁၃ ဆ) ဥအဖြူ အခန်းအပူချိန်
▢၁ Tsp vanilla ထုတ်ယူ
▢1 1/2 Tsp တောက်ပသောဝိုင်သကြားလုံးအရသာ (ရွေးချယ်နိုင်သည်) တွဲဖက်လင့်ခ်: https://www.amazon.com/dp/B007BIDREU/?ref=exp_sugargeekshow_dp_vv_d
▢၁-၂ ပေါက် လျှပ်စစ်ပန်းရောင်အစားအစာအရောင် သငျသညျပန်းရောင်ရှမ်ပိန်ကိတ်မုန့်ချင်လျှင် optional ကို
အညိုရောင်သကြားလွယ်ကူသော Buttercream Frosting
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) Pasteurized Egg White
▢၃၂ oz (907 ဆ) မလုံလောက်ဘူးနို့
▢၃၂ oz (907 ဆ) သကြားမှုန့်
▢၁ ဇွန်း သကာရည်
▢1/8 '' Armature ဝါယာကြိုး
▢1/4 '' သစ်သားရွက်တိုင်
မီးဖိုကို335ºFသို့အပူပေးပါ။ သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ရှမ်ပိန်၊ ကြက်ဥ၊ ထောပတ်) အားလုံးသည်အခန်းအပူချိန်ရှိကြောင်းသေချာစေပါ
မှစကေးကိုသုံးပါ သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအလေးချိန် (အရည်များအပါအ ၀ င်) မဟုတ်ပါကညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါ (ဇွန်း၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၊ အဖြစ်တော့စသည်) ။ မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုစာရွက်ကဒ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစားပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ခွက်များအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမိုတိကျပြီးသင်၏စာရွက်၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေသည်။
6'x2 'ိတ်မုန့်ဖုတ်သုံးလုံးကိုကိတ်မုန့် (သို့) အခြားနှစ်သက်ဖွယ်ဒယ်အိုးမှုန့်ဖြင့်ပြင်ဆင်ပါ။ Battery များပြည့်နှက်နေသောလမ်း၏ 3/4 အကြောင်းကိုသင်၏အိုးထဲသို့ဖြည့်ပါ။
မုန့်ညက်၊ သကြား၊ မုန့်ဖုတ်အမှုန့်၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်ဆားကိုရောနှောထားသောရောနှောထားသောအိုးတွင်လှော်ချိတ်တွဲပါရှိသည်။ ပေါင်းစပ် 10 စက္ကန့်ရောမွှေပါ။
ကြက်ဥအဖြူ၊ ဝိုင်အရသာ၊ ရှမ်ပိန်နှင့် vanilla တို့ကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ပါ၊ ကြက်ဥပြိုကွဲရန်ဖယ်။ ဖယ်ထားပါ။ မင်းကိတ်မုန့်ကိုပန်းရောင်လိုချင်ရင်ပန်းရောင်အစားအစာအရောင်ကိုထည့်ပါ။ ဘေးဖယ်ထားပါ။
သင်၏နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်များကိုခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများထဲသို့ထည့်ပြီးအရောအနှောသည်ကြမ်းတမ်းသောသဲနှင့်တူသည် (စက္ကန့် ၃၀ ခန့်) သည်အထိရောနှောပါ။ ။
သင်၏နို့ / ရေနံအရောအနှောထဲထည့်ပြီးခြောက်သွေ့သောအာဟာရများစိုစွတ်အောင်မွှေပေးပါ။ ထို့နောက် med (သို့) ကျွန်ုပ်၏ kitchenaid တွင် ၄ ခုထားပါ၊ bosch တွင်ထည့်ပါ) သည်အထိရောနှောပါစေ။ သင်ဤအဆင့်တွင်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုရောမွှေပါကသင်၏ကိတ်မုန့်ပြိုကျနိုင်သည်
သင်၏ပန်းကန်လုံးကိုခြစ်ပြီးအမြန်နှုန်းကိုအနိမ့်သို့လျှော့ချပါ။ သင်၏ကြက်ဥအဖြူအရောအနှောကိုထပ်ဆင့်သုံးခုထဲထည့်ပြီး Battery ရောနှောခြင်းကိုထပ်တိုးများအကြား ၁၅ စက္ကန့်မျှခွင့်ပေးပါ။
သင်၏ကိတ်မုန့်ဖုတ်များကို ခွဲ၍ မိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ သို့သွားရန်သို့မဟုတ်သွားတိုက်တံကစင်တာမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာမထွက်မချင်းခုတ်ပါ။ တချို့ကျုံ့ပုံမှန်ပါပဲ။
ကိတ်မုန့်ကနေရေနွေးငွေ့ကိုလွှတ်ပေးရန်တစ်ချိန်ကကောင်တာပေါ်ကိတ်မုန့်ပျံ FIRMLY ကိုချက်ချင်းအသာပုတ်ပါ။ ဒါကကိတ်မုန့်အလွန်အကျွံကနေတားဆီး။
လွယ်ကူသော Buttercream ညွှန်ကြားချက်များ
ကြက်ဥအဖြူနှင့်သကြားအမှုန့်များကိုသင်၏ရပ်နားသည့်ရောနှောထားသောအိုးတွင်ထည့်ပြီးသကြားလုံးပူးတွဲပါ ရှိ၍ ၅ မိနစ်အမြင့်တွင်ရိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ထောပတ် (အပျော့ပြောင်း) ကိုအလုံးပေါင်းများစွာထဲထည့်ပြီးထောပတ်တွေအားလုံးမထည့်မချင်းအထိရိုက်ထည့်ပါ။ သင်၏ဆား၊ သကာရည်နှင့် vanilla တွင်ထည့်ပါ။
buttercream သည်အခွံမာ။ မဖြူဘဲအဖြူရောင်ဖြစ်သည့်အထိဆက်တိုက်ရိုက်နှက်ပါ။ သင်၏ရောနှောမှုပေါ် မူတည်၍ ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အထိကြာနိုင်သည်။ ထောပတ်သီးအရသာရှိရင်ရောစပ်ပါ။
(optional) လှော်ပူးတွဲမှုမှ switch နှင့်နှင်းခဲထဲကနေပူဖောင်းဖယ်ရှားပစ်ရန် 10-15 မိနစ်အနိမ့်အပေါ်ရောမွှေပါ။ Frosting သည်ပျော့ပျောင်းပြီးပုံမှန်ဖြစ်သည်။
သင်သတိမပြုမိရန်အရေးကြီးသောအရာများ 1. သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုယူလာပါ အခန်းအပူချိန် သင့်ရဲ့ဘက်ထရီပြတ်တောက်မသွားအောင်သို့မဟုတ်နွေးထွေးမှုအနည်းငယ် (ဥများ၊ ထောပတ်နို့၊ ထောပတ်စသည်) ပင်။ 2. မှစကေးကိုသုံးပါ သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအလေးချိန် (အရည်များအပါအ ၀ င်) မဟုတ်ပါကညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါ (ဇွန်း၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၊ အဖြစ်တော့စသည်) ။ မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုစာရွက်ကဒ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစားပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ခွက်များအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမိုတိကျပြီးသင်၏စာရွက်၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေသည်။ ၃။ Mise en Place လေ့ကျင့်ပါ။ သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုကြိုတင်တိုင်းတာ။ တစ်ခုခုမတော်တဆထွက်ခွာရန်အခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချရန်သင်မရောစပ်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ 4. နှင်းခဲများမဖြည့်ခင်ကိတ်မုန့်များကိုအေးအောင်လုပ်ပါ။ နှင်းခဲနှင့်အေးခဲနေသောကိတ်မုန့်ကိုသင်လိုချင်လျှင်ဖောင့်ထဲတွင်ထည့်နိုင်သည်။ ဤသည်ကိတ်မုန့် stacking အဘို့လည်းကြီးလှ၏။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူစေရန်မပို့မီကျွန်ုပ်၏ကိတ်မုန့်များကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်အမြဲထားလေ့ရှိသည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ သင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုအလှဆင်သည်။ ၅။ အကယ်၍ စာရွက်သည်မုန့်ညက်ကဲ့သို့သောတိကျသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတောင်းဆိုပါက၊ ၎င်းသည်အဆင်ပြေကြောင်းစာရွက်တွင်မဖော်ပြထားပါက၊ ရည်ရွယ်သည့်ဂျုံမှုန့်၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအစားထိုးဒီစာရွက်ပျက်ကွက်စေနိုင်သည်။ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောဂျုံမှုန့်သည်မြင့်မားသောအေးဂျင့်များမရှိသောလွင်ပြင်ဂျုံဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပရိုတင်းပမာဏ ၁၀% မှ ၁၂% အထိရှိသည်။ ဂျုံမှုန့်သည်ပျော့ပျောင်း။ အနိမ့်ပရိုတိန်းဂျုံမှုန့်ဖြစ်ပြီး ၉% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်။
ဂျုံမှုန့်ရင်းမြစ်များ - ယူကေ - Shipton Mills Cake & Pastry Flour
ကျွန်တော်တို့ကို pasteurized အတွက်ကြက်ဥဖြစ်ကြသည်